महराको विकल्प अब के ? - Nepal's Digital News Paper
महराको विकल्प अब के ?
प्रकाशित मिति : सोमवार, कार्तिक १८, २०७६
काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई साधारण तारेख या धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा पुर्पक्षका लागि महरालाई थुनामा पठाएको छ । महराका लागि अब के विकल्प छ त ?
जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझे उनी १७ नम्बर निवेदन लिएर उच्च अदालत जान पाउँछन् । उच्चले जिल्लाको आदेशमा पुनर्विचार या त्यसलाई नै सदर गर्न सक्छ । त्यहाँ पनि चित्त नबुझे सर्वोच्चसम्म पुग्ने विकल्प छ । नभए जिल्लाको फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
संघीय संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा महरा पक्राउ परेका थिए । अभियोग लागेपछि नै उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सांसद पदबाट भने उनको राजीनामा आएको छैन । नेकपा सचिवालय बैठकले दुवै पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, सचिवालय बैठकको निर्देश अटेर गर्दै उनले सांसद पदबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
संसद सचिवालय असोज २३ गते एक सूचना निकाल्दै फौजदारी अभियोग लागेका महराको सांसद पद निलम्बन गरेको थियो ।